वामदेव गौतमका लागि आयो निकै ठूलो खुसीको खबर ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/वामदेव गौतमका लागि आयो निकै ठूलो खुसीको खबर !
वामदेव गौतमका लागि आयो निकै ठूलो खुसीको खबर !
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका वकिलहरुले उनलाई मन्त्री बनाउन नेपालको संविधानले नरोक्ने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा गौतमको पक्षबाट बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा।डा। युवराज संग्रौला, शेरबहादुर केसी र राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाले गौतमलाई मन्त्री बन्न नरोक्ने तर्क गरेका हुन्।
संग्रौलाले गौतमलाई मन्त्री बनाउन सकिने तर्क पेस गर्दै लेखेको १२ पेजको बहस नोट नै बुझाएका छन्।
४५ मिनेट बहस गरेका संग्रौलाले रिट निवेदकले वामदेव गौतममाथि व्यक्तिगत रुपमा केन्द्रित भएर रिट हालेको आरोप लगाए।
उनले असोज ७ गते अदालतले दिएको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न र थप अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशले दिएको आदेश नै गलत रहेको अधिवक्ता संग्रौलाको दलिल थियो।
उनले संविधानको धारा ७८ को व्याख्या गर्दै गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा कानुनी प्रश्न नउठ्ने ठोकुवा गरे। संविधानको धारा ७८ ९१० मा सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे पनि राष्ट्रियसभामा जान कुनै अवरोध नहुने तर्क गरे।
गौतमतर्फका वकिलहरुको बहस नसकिएकोले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार मध्यान्ह १२ बजे फेरि बहस हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्त बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा असोज ५ गते रिट हालेका थिए। सो मुद्दा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित ५ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ। सो मुद्दाको असोज १४ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। सागर न्यौपानेले नेपाल खबरमा लेखेका छन् ।
बैशाखमा बाडी : यसरी डुब्यो कंचनपुर ! बगायो किसानको आन्नबाली